May 2022 - MM Daily Life
ကြောင်တစ်ကောင်ကိုရွေးချယ်ပြီး သင့်ဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်ကို ရှာဖွေလိုက်ရအောင်
May 23, 2022 by MM Daily Life
ကြောင်တစ်ကောင်ကိုရွေးချယ်ပြီး သင့်ဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်ကို ရှာဖွေလိုက်ရအောင် ပထမ ကြောင် ပထမ ကြောင် ကိုရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရည်မှန်းချက်က အသိပညာတိုးတက်မူနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင်က ရိုးသားပြီး တရားမျှတမူကို လိုလားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေသူ တစ်ဦးပါ။ သင့်ရည်မှန်းချက်တွေ အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင် သင်လုပ်တဲ့ ဘယ်အလုပ်ကိုမဆို ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် သင်လုပ်ကိုင်တဲ့အလုပ်ကရရှိတဲ့ ဗဟုသုတနဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကို တခြားသူတွေကို မျှဝေဖို့ ဝန်မလေးပါနဲ့။ ဒုတိယ ကြောင် ဒုတိယ ကြောင် ကိုရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရည်မှန်းချက်က စိတ်ခံစားချက်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင် သင်ဟာ တစ်ပါးသူအပေါ် ချစ်ခင်သနားတက်ပြီး စာနာစိတ်ပိုမိုထားရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စိတ်ခံစားချက်တွေကို စနစ်တကျ ထိန်းချုပ်အသုံးချနိုင်ဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ တတိယ ကြောင် တတိယ … Read more
ကြာသာပတေးသားသမီးတွေနဲ့ ပတ်သက်မိပြီးဆိုလျှင်..ဒါလေး တွေ သိသင့်တယ်နော်
သင်ပထမဆုံးမြင်လိုက်တဲ့ ငှက်ပိတုန်းလေးက ပြောပြပေးမယ့် သင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထား
သင်ပထမဆုံးမြင်လိုက်တဲ့ ငှက်ပိတုန်းလေးက ပြောပြပေးမယ့် သင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထား နံပါတ် ၁ သင်က ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။ တဖက်သားအပေါ် သြဇာအာဏာအပြည့်နဲ့ လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိပြီး သင့်အပေါ် ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း မရှိပါဘူး။ ကိုယ်ပိုင်စံနှုန်းတွေ သတ်မှတ်ထားတတ်ပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုကို ဘယ်လိုအခက်အခဲပဲရှိရှိ ရယူနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ခေါင်းမာတယ်လို့ပဲ ပြောရမလား သင်က ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို လွယ်လွယ်မပြင်တတ်ပါဘူး။ အချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင် တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းကိုပဲ စွဲစွဲမြဲမြဲချစ်တတ်ပြီး ချစ်သူယုံကြည်အောင် အလုပ်နဲ့ လက်တွေ့သက်သေပြတတ်ပါတယ်။ နံပါတ် ၂ သင်က ပညာရှိတစ်ယောက်ပါ။ သင့်ရဲ့အချိန်တော်တော်များများကို တစ်ယောက်တည်း ဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့ အတွေးနယ်ချဲ့ရင်း ကုန်ဆုံးတတ်တဲ့အတွက် သင့်ကို စိတ်ကူးယဉ်သမားလို့လည်း ပြောလို့ရပေမယ့် တကယ်တော့ သင်ဟာ လက်တွေ့ကျတဲ့ဘဝတစ်ခုကို တောင်းတနေတာပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာ မိမိကိုရော ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုပါ ဂရုစိုက်ပေးချင်ပြီး အရာရာဖြည့်ဆည်းပေးချင်တဲ့စိတ်က … Read more
ရေနွေးအိုးလေးတွေက ပြောပြပေးမယ့် သင့်အကြောင်းက ဘာတွေလဲ ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့
ရေနွေးအိုးလေးတွေက ပြောပြပေးမယ့် သင့်အကြောင်းက ဘာတွေလဲ ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ နံပါတ် ၁ သင်ဟာ တီထွင်ကြံဆမှုကောင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။ ဘဝကို ဂုဏ်ပကာသနတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းရတာမျိုးကို မနှစ်သက်ဘဲ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး ဖြတ်သန်းရတာကို သဘောကျသူတစ်ယောက်ပေါ့။ ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်နဲ့ ထောင်တစ်ထောင့်မှာ အေးဆေးထိုင်ပြီး ရောက်တတ်ရာရာ တွေးတောရတာမျိုးကို နှစ်သက်ပါတယ်။ နံပါတ် ၂ သင်ဟာ အမြဲအားအင်အပြည့်နဲ့ တတ်ကြွနေသူတစ်ယောက်ပါ။ ငြိမ်ငြိမ်မနေပဲ လျှောက်လုပ်နေရတာမျိုးကို နှစ်သက်ပြီး ပျင်းတဲ့ခံစားချက်က သင့်အတွက် ငရဲခန်းတစ်ခုလိုပါပဲ။ ကမ္ဘာကြီးနဲ့ လူတွေအကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားနေတတ်ပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းတာက သင့်ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုပေါ့။ နံပါတ် ၃ သင်ဟာ အေးအေးချမ်းချမ်း နေတတ်သူတစ်ယောက်ပါ။ ဘဝရဲ့အနိမ့်အမြင့် အတက်အကျတွေကို နားလည်သဘောပေါက်ထားတဲ့အတွက် လောကဓံတွေကို မဖြုံပါဘူး။ ဟာသဉာဏ်အပြည့်ရှိပြီး သနားကြင်နာတတ်တာလေးက သင့်ရဲ့ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေပေါ့။ … Read more
မိခင်နဲ့တူတဲ့ ချစ်သူ (သို့မဟုတ်) ဇနီး ကို ရှာကြပါ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ မိခင် ဆိုတာ တစ်ယောက်တည်းသာ ရှိပါတယ် ဒါပေမယ့် မိခင်နဲ့ တူတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ကို သင့်ရဲ့ ဇနီးအဖြစ် သော်လည်းကောင်း၊ ချစ်သူအဖြစ် သော်လည်းကောင်း ရရှိ ပိုင်ဆိုင်ထားတယ် ဆိုရင် အလွန်တရာမှ ကံကောင်းပါပေတယ် စိတ်ပူတတ်ခြင်းတစ်စုံတစ်ခု ဆိုရင် မိခင် တစ်ယောက်လို စိတ်ပူပန် တတ်သလို အမျိုသမီးတွေဟာ စိတ်ပူပန် တတ်ကြပါတယ် သူတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်မှာ တစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်နေမလား ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်ဟာ မိခင် တစ်ယောက်နဲ့ အလားသဏ္ဍန် တူပါပေတယ် ကြင်နာ ယုယ မြတ်နိုးတတ်ခြင်းအချို့သော အမျိုးသမီးတွေဟာ မိမိ၏ ခင်ပွန်းအပေါ် ကြင်နာ၊ ယုယ မြတ်နိုးတာဟာ တစ်ခါတစ်လေ အတိုင်းအထက် အလွန် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် ထိုသူတို့ဟာလည်း မိခင်တစ်ယောက် သားသမီးအပေါ် … Read more
တစ်ခါက အဖွားအိုတစ်ဦးဟာ ဈေးထဲမှာ လိမ္မော်သီးဆိုင်လေးတစ်ဆိုင် ဖွင့်ထားပါတယ်. လူတစ်ယောက်ကလည်း အမြဲလို အဖွားအိုဆိုင်ကနေ လိမ္မော်သီးဝယ်လေ့ရှိသတဲ့..သူ့စိတ်ကြိုက် လိမ္မော်သီးတွေ ရွေးပြီးတာနဲ့ ကီလိုချိန် ကျသင့်ငွေရှင်းပြီးရင် သူအမြဲလုပ်နေကျ အပြုအမူတစ် ခုရှိသတဲ့။အဲဒါကတော့ လိမ္မော်သီးအားလုံး အိတ်ထဲထည့်ပြီးတိုင်း လိမ္မော်သီးတစ်လုံးကို အိတ်ထဲက ပြန်ထုတ် အခွံခွာပြီး လိမ္မော်သီးတစ်စိတ်ကို စားပါတယ်။ ပြီးရင် “ဒီလိမ္မော်သီးက အရမ်းချဉ်တာပဲ” လို့ ပြောပြီး ကျန်တဲ့တစ်လုံးလုံးကို အဖွားအိုကို ပေးပါတယ်။အဖွားအိုကလည်း တစ်စိတ်စီ စားကြည့်ရင်း “ဘာဖြစ်လို့လဲ မချဉ်ပါဘူး။ချိုပါတယ် လူကလေးရဲ့” လို့ အမြဲပြန်ပြောပြီး အဖွားအိုက အဲ့လိုပြောပြီးတိုင်း အဲဒီလူက သူ့လိမ္မော်သီးအိတ်ကို ကောက်ဆွဲပြီး ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့ ပြန်သွားတာပါပဲ။အဲ့လို လိမ္မော်သီးလာဝယ်တိုင်း လုပ်နေကျလူဟာ တစ်ခါမှာ ဈေးကို သူ့ဇနီးပါ ပါလာပါတယ်။လိမ္မော်သီးဆိုင်မှာ ထုံးစံအတိုင်း သူ့ … Read more
သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ပန်းလေးကတစ်ဆင့် သင်ဘယ်လောက်အတ္တကြီးလဲ ပြောပြမယ်
May 22, 2022 by MM Daily Life
သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ပန်းလေးကတစ်ဆင့် သင်ဘယ်လောက်အတ္တကြီးလဲ ပြောပြမယ် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို မချစ်ခင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်ချစ်တတ်အောင် ကြိုးစားရမယ်တဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်…ကျွန်မတို့ဟာ သူတစ်ပါးကို မချစ်ခင် ကိုယ်ကိုယ်ကို အရင်ချစ်တတ်အောင် ကြိုးစားရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ချစ်တာနဲ့ အတ္တကြီးတာက မတူပါဘူး။ ကိုယ်တိုင် ပျော်ရွှင်ဖို့ ၊ အောင်မြင်ဖို့အတွက် သူတစ်ပါးကို စိတ်ဆင်းရဲ၊ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်အောင်လုပ်တာမျိုးကို အတ္တကြီးတယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကတစ်ဆင့် သင်ဘယ်လောက် အတ္တကြီးလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားမှာပါနော်…. နံပါတ် (၁) သင်ဟာ အတ္တမကြီးပါဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ သင်ဟာ သူတစ်ပါးကို နားလည် ခွင့်လွှတ်ပေးတတ်ပြီး သူတို့တွေရဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို လက်ခံပေးတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင်ဟာ တဖက်သားရဲ့ခံစားချက်တွေကို ဂရုစိုက်ပေးတဲ့အပြင် သူတို့ရဲ့ ရင်တွင်းခံစားချက်တွေကို နားထောင်ပေးတတ်ပြီး … Read more
ပုလင်းတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီး လက်ရှိသင်ဘာတွေ ခံစားနေရလဲ ပြောပြမယ် (မှန်တယ်ဆို ရှယ်ဖို့မ မေ့နဲ့နော်)
ပုလင်းတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီး လက်ရှိသင်ဘာတွေ ခံစားနေရလဲ ပြောပြမယ် (မှန်တယ်ဆို ရှယ်ဖို့မ မေ့နဲ့နော်) (၁) အစိမ်းရောင်ဆေးပုလင်း အစိမ်းရောင်ဆေးပုလင်းကို ရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ ငယ်ငယ်တုန်းက လုပ်ခဲ့မိတဲ့ အတိတ်က အမှားတွေကို ပြန်လည်ပြုပြင်ချင်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒရှိနေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်စိတ်ထဲမှာ သင်သာအခုချိန် အဲဒီအရွယ်၊ အဲဒီအချိန်ကို ပြန်ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီလိုအမှားမျိုးတွေ တက်နိုင်သမျှ မလုပ်မိအောင် ရှောင်မယ်လို့ တွေးနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ကို အကြံတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်။ အတိတ်က အမှားတွေကို ပြန်တွေးပြီး စိတ်ဆင်းရဲနေတာထက် ဒီလိုတူညီတဲ့အမှားမျိုးကို နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီး မလုပ်မိအောင် ရှောင်ကြဉ်တာက ပိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ အတိတ်ကအမှားတွေကနေ သင်ခန်းစာယူပြီး အနာဂတ်မှာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အရေးအသစ်တွေကို ဖန်တီးနေကြတာပါ။ အမှားဆိုတာ လူတိုင်းမှာ ရှိတဲ့အတွက် သင့်အနေနဲ့ မှားကောင်းမှားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် … Read more
ပုံလေးသုံးပုံကနေ ပြောပြပေးမယ့် သင့်ရဲ့ရှေ့တစ်ပတ်အတွက် ကြိုတင်ဟောကိန်း
ပုံလေးသုံးပုံကနေ ပြောပြပေးမယ့် သင့်ရဲ့ရှေ့တစ်ပတ်အတွက် ကြိုတင်ဟောကိန်း (၁) ရှေ့တစ်ပတ်ထဲမှာတော့ သင့်ကိုသတိပေးချင်တာ စိတ်ခံစားချက်တွေကို လွှတ်မပေးဖို့ပါပဲ။ စိတ်ထင်တိုင်းမကြဲဖို့၊ ဘာလုပ်လုပ် ဘာကိုင်ကိုင် အချိန်ယူစဉ်းစားပြီးကာမှ ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။ လာမယ့်ရသတ္တပတ်မှာ သင့်ရဲ့စိတ်အခြအနေဟာ တော်တော်လေးကို ပျော့နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ ဒေါသထွက်လွယ်၊ ဝမ်းနည်းလွယ်၊ စိတ်ဓာတ်ကျလွယ်နေမှာပါ။ နောက်ထပ် သတိထားစ/ရရာအချက်ကတော့ လူတွေကို အဲဒီအပတ်ထဲ ဂရုသိပ်မစိုက်ပါနဲ့လို့။ (၂) သင့်အနေနဲ့ ရှေ့တစ်ပတ်မှာတော့ လက်ရှိခံစားနေရတဲ့ စိတ်ညစ်ထွေးမှုတွေကို နောက်တစ်ပတ်မှာ ကျော်လွန်နိုင်မှာပါ။ နောက် ကြိုးစားထားခဲ့သမျှတွေကို မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း သင့်အနေဲ့ အံ့အားသင့်ပျော်ရွှင်မှုမြင်တွေ့ရမှာပါ။ ဒါကြောင့်အချိန်ခဏလေးပဲစောင့်ပေးပါ။ ကောင်းခြင်းတွေပဲ လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ (၃) လာမယ့်တစ်ပတ်မှာတော့ သင့်အနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ ကောင်းတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မပြီးပြတ်သေးတဲ့ ကိစ္စတွေကို … Read more
သင်ရွေးချယ်မယ့် သင်္ကေတတစ်ခုက ပြောပြမယ့် သင့်အနာဂတ်အကြောင်း
သင်ရွေးချယ်မယ့် သင်္ကေတတစ်ခုက ပြောပြမယ့် သင့်အနာဂတ်အကြောင်း (1) တည်ငြိမ်မျှတမှု သင်္ကေတ သင်ဟာ ကောင်းတာကိုဖြစ်စေ ဆိုးတာကိုဖြစ်စေ ပုံကြီးချဲ့တတ်သူပါ။ အဖြစ်အပျက်သေးလေးတွေကတောင် သင့်ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို များစွာ သက်ရောက်စေနိုင်ပြီး ဒါဟာ သင့်အတွက် မကောင်းတဲ့အချက်ပါ။ သင်ဟာ စိတ်ခံစားမှုတွေကို သိပ်အလေးမပေးဘဲ တည်ငြိမ်မှုရဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ ဒီမျှတမှု သင်္ကေတကို သင်ရွေးချယ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ သင်ဟာ မကြာခင်မှာ သင်အချိန်ပေး ကြိုးစားအားထုတ်နေခဲ့တဲ့ အရာတစ်ခုနဲ့ ပတ်သက်လို့ အောင်မြင်မှုကို ရရှိတော့မှာပါ။ အဲဒီ့မတိုင်ခင်တော့ သင်တည်ငြိမ်မှုရအောင် ကြိုးစားရပါမယ်။ (၂) ပင့်ကူအိမ် သင်္ကေတ မကြာခင် သင့်ဘဝထဲမှာ ကြီးမားတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာတော့မှာမို့ ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုနေပါပြီ။ ပြောင်းလဲမှုတွေက သင့်ဘဝရဲ့ တစ်ဆစ်ချိုးလို့တောင် ခေါ်လို့ရမှာပါ။ ပြောင်းလဲမှုတွေကို … Read more